Marketing de intrare /
Nasiib wanaag, waxaa jira isbeddello weyn oo ka dhacaya adduunka oo dhan kuwaas oo ku saabsan sidii loo diiwaangelin lahaa xayawaan weyn oo aad u sahlan: kuwaas oo ah, boqollaal ficilooyin cusub oo cusub uo Miyuu jaan-goynta dhabta ah ee dhabta ah? Miyuu nabdoon yahay în aad ganacsigaaga ku dhisto daba galka kale?
1 Rise iyo Reign of Domin Domenii
2 Gali TLD cusub
Rise iyo Reign of Domin Domenii
Tan iyo bilowgii internetka, .com wuxuu ahaa kan ugu sareeya ee TLD. (TLD waxay u taagan tahay "heer sare ah," iyo waxay tilmaamaysaa dhammaadka domeniu sida sida .com, .net, .org, iwm.) "Dot com" wuxuu la mid yahay kan laftiisa. Ka fikir "Dot Com Crash"Sanadka oo dhan 2000 – ma aha dhammaan kuwa ku guuldareystay bilawga inay dhab ahaantii ahaayeen.
În kasta oo TLD-yada kale ay jireen bilawgii, midkoodna kuma riyaaqin. Waa waxkasta ogyahay, aqoonsanayaa, oo filaya inuu arko. 057-005 Dhab ahaanbuu ugu cadday Sababtoo ah xaaladeeda iyo muuqaalkeedii hore ee tobankii sano ee la soo dhaafey, badi ugu fiicnaanta .com Domenii ayaa hore loo qaaday.
Insure.com iibiyey 16 milioane USD în 2009
VacationRentals.com ayaa loo iibiyey 35 milioane dolari în 2007
Internet.com ayaa loo iibiyey 18 milioane USD în 2009
Facebook wuxuu iibsaday FB.com 8,5 milioane USD în 2010
Ganacsiga domainka ugu sareeya (illaa iyo noiembrie 2017)
Gali TLD cusub
ICANN (Shirkadda Internetka e Magacaabay Magacyada iyo Nambarada, hay’adda aan faa’iido doonka ahayn ee ka masuulka ah magacyada), ayaa sameeyay dhowr TLD oo dheeraad ah tan iyo bilawgii, laakiin midkoodna uma soo dhowaanin. Laakiin 2011, ICANN ayaa xannibaadyo badan ku soo rogay abuurista TLD-yada cusub, sannadaha soo socda boqolaal cusub oo la kordhiyay ayaa la helayaa. Qof kasta ayaa codsan kara inuu abuuro qorshe cusub oo cusub oo TLD ah.
Daraasado kala duwan ayaa bilaabay inay diiwaangaliyaan magacyadooda caanka ah (oo ay ku jiraan .aaa, .aetna, .aol, .chrome, .chrysler, iyo kuwo kale oo badan), iyo kuwo kale oo badan oo TLD ah oo la shopira tiknoolojiy warhadaha, goobaha juqraafi, iyo hiwaayadaha hadda heli karo si loo diiwaan geliyo.
.shaqaalaha 68,88 USD .bebelus 64,88 USD
.lat 25,88 USD .laugh out Loud 12,88 USD
.AC 32,88 USD .khamri 6,88 USD
.artă 221,00 USD .camă 6,88 USD
.eco 13,00 USD .joc 9,88 USD
.observator 13,00 USD ciyaarta 188,88 USD
.asa de 13,00 USD .tub 25,88 USD
.grad 6,88 USD .mama 15,88 USD
.daryeel 6,88 USD .dentist 31,88 USD
.familie 12,88 USD .adult 79,88 USD